/Blog/Sunifiram/I-7 Best Nootropics (SmartDrugs) kwimarike yeSunifiram
ezaposwa ngomhla 09 / 17 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Sunifiram.
Yonke into malunga ne-Sunifiram powder
1.Sunifiram powder 314728-85-3 Iimpawu zeMichiza
I-2.Sunifiram (314728-85-3) i-nootrop okanye isilwanyana
3. I-Sunifiram (dm 235) - luhlobo luni lwe-nootropic, yintoni
ngumgaqo walo wesenzo, ama-dosages, ukuhlaziywa
4.Sunifiram powder (314728-85-3) Isisombululo
5. Iimpembelelo zithini i-Sunifiram?
6.Kuphi kwaye kusetyenziswa njani i-Sunifiram?
7. Ziziphi iimiphumo zeSilifiram?
I-8.Iphi i-Sunifiram yamava ayaziwa?
I-Sunifiram (i-DM-235) isilwanyana sokulinga esisebenza njengesimo se-allosteric esihle se-AMP receptor, i-1 eye yaboniswa ukuba ibe neempembelelo ze-nootropic kwizilwanyana ezinobungakanani obuphezulu ngaphezu kwe-piracetam. Uchungechunge lweemveliso ezidibeneyo ziyaziwa, enye ibe yi-unifiram (DM-232).
1. I-powder Sunifiram 314728-85-3 Iimpawu zeMichiza
Inani le-CAS: 314728-85-3
2. I-Sunifiram (314728-85-3) i-nootrop okanye isiyobisi.
Iidakamizwa zeNootropic ngokuthe ngcembe, kodwa ngokuqinisekileyo, ziyinxalenye yobomi bethu obuzalisiweyo, ubomi obunzima. Namhlanje zimelelwe kwiindidi ezahlukahlukeneyo, zininzi zikwinqanaba lophuhliso nophando, kanti ezinye aziwa.
Iidakamizwa zeNootropic ngokuthe ngcembe, kodwa ngokuqinisekileyo, ziyinxalenye yobomi bethu obuzalisiweyo, ubomi obunzima. Namhlanje zimelelwe kwiindidi ezahlukahlukeneyo, zininzi zikwinqanaba lophuhliso nophando, kanti ezinye aziwa. Imarike emnyama igcwele nootropics, kuba imfuno yabo iyanda - abantu baye bafuna ukusebenzisa iindawo zokugcina iingqondo.
Amachiza amaninzi kweli qela akakwazi ukungeniswa eRashiya aze athengiswe. Kodwa into enqatshelweyo ayithethi kakubi. Umzekelo ocacileyo wesixhobo esinjalo ngu-Sunfiram (onqatshelwe ukungenisa). Ngokweenkcukacha ezisemthethweni, akayidlulanga inani elaneleyo leemvavanyo eziyimfuneko kubantu. Nangona kunjalo, iziphumo zophando lwezenzululwazi ezifumanekayo okwangoku zivumela ukuba senze izigqibo malunga nokusebenza kwayo ephezulu.
Abantu abaninzi baye bafumana impembelelo Sunifiram. Abanye baye basombulula ngokupheleleyo iingxaki zempilo. Ukuqwalasela idatha yokwenza iimvavanyo kunye nezigqibo zenzululwazi, isichengiselwano asibangeli iziphumo zecala, ngoko ke nangona kungenakwenzeka ukuphelisa eso sifo, ngoko ke, kuya kubakho ukuyeka ukuphuhliswa kwayo ngaphandle kokulimaza umzimba. Kule nqaku ndifuna ukutyhila iimpawu eziqhelekileyo zokusebenzisa i-Sunfire ngesiseko solwazi olufunyenwe kwiifom, kwaye uthetha malunga nokuba kwenzeka kwaye akunakwenzeka ukuthenga kwayo kwimarike yaseRussia.
3. Sunifiram (dm 235) - luhlobo luni lwe-nootropic, yintoni umgaqo walo wesenzo, ama-dosages, ukuhlaziywa
I-Sunfyram (ifomula yamakhemikhali C14H18N2O2) yiphumo le-pyracetam eyenziweyo. Unomphumo ofanayo kunye nawo onke ama-racetamen, kodwa unamandla kakhulu kwaye unobuncwane obuncitshisi ngaphezu koqandaphinda. Inkqubo yesenzo esiphezulu se-dm-235 kukusetyenziswa kweemitholampi ze-AMPA, eziqinisekisa ukuveliswa kwe-glutamate ye-neurotransmitter, ngokubhekiselele kuyo ihlelwe njengama-ampakines.
I-Glutamate ibambe iqhaza eliphambili kwimeko yenkcazo, ukusilela kwayo kubangela ukulahlekelwa kwememori, ubunzima bokufunda, ukukwazi ukugxila, njl. Kwizifundo zezilwanyana, kuye kwaboniswa ukuba nangona kuvimba okwenziwe ngama-receiver AMPA, i-sunifirum ivuselela ngokwaneleyo ukuveliswa kwe-glutamate kwinkqubo yesantya ephakathi.
Ukongezelela, njengabanye be-ratsetam, i-Sunifiram yandisa umsebenzi we-receptors ye-cholinergic. Ngenxa yoko, umphumo weziyobisi ukhokelela kwimiphumo enjengale:
• kuququzelela ukukhumbula;
• isekela isakhiwo senkqubo yesantya phakathi kwexesha loxinzelelo lwengqondo;
• kuphucula ukuhanjiswa kweempembelelo phakathi kwe-neurons;
• lawula umsebenzi obalulekileyo weeseli zengqondo;
• ibeka ngokuqhelekileyo kwaye iphakamisa umthamo wesifo kwiingqondo;
• ukwandisa ingqwalasela, ukuxininisa, ukwandisa ukuphaphama nokuqonda;
• igalelo ekuphuculeni ubudlelwane phakathi kwama-hemispheres njalo njalo.
Imiyalelo evunyelweyo yokusetyenziswa kwe-Sunifiram no. Isilwanyana sinolawulo lwe-10-50 mg. Ngokwenza oko, umthamo osebenzayo we-dm-235 ubuncinane ngu-30 mg ngokulandelelana. Ngokubanzi, kubalulekile ukuqwalasela ukuba amava okusebenzisa nootropics kuncinci kakhulu, xa kuthelekiswa nabasebenzisi bangaphandle. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuphulaphula ngononophelo kwiininzi "zamabhunga".
4. I-Sunifiram powder Isilinganisi
Umtya osemthethweni we-Sunifiram ofunekayo unokuhluka ngokuxhomekeka kwiimeko zokusetyenziswa, ukukhubazeka kwengqondo ku-2.4-4.8g imihla ngemihla.
iziyobisi zinempembelelo kuba zenza utshintsho ekuhanjisweni kwezinto ezisemthunzini kwaye zenze iisensi zeentsimbi ezivela kwiiseli ezithile ze-stem. Amalungiselelo ahlukeneyo avelise ukusebenza kwawo kwinkqubo yesistim ephakathi ngokubangela ukuba utshintsho oluhle kwingqondo. Bandisa ukongamela kunye nokukhumbula kunye nokwandisa izizathu kunye nomoya. Yingakho i-Sunifiram sele iyaziwa ngeJamani kwaye isetyenziswe ngeenjongo ezahlukeneyo, kubandakanya ukuguga nokugugu. I-Sunifiram yinto esemthethweni kwaye ingathengwa kuma-pharmacy okanye kubaboneleli abafanelekileyo kwi-intanethi.
Ekubeni umphumo othile weemalungiselelo ngamnye uhlukile kwabanye, i-arhente efanelekileyo kufuneka ikhethwe phambi kokuqala kokonyango. Nangona ezinye iimveliso zikhuthaza ukudala, ezinye izongezelelo zandisa ukhenketho. Ngeliyobisi elifanelekileyo le-Sunifiram ungafikelela kwimiphumo ethile kwaye, ngokuxhomekeka kwiimfuno zakho, unikezele ngakumbi ukukhuthaza nokugxininisa, okanye ukwakha ukunyamezela okuphezulu nokuxhatshazwa kwememori.
6. Kuphi kwaye kusetyenziswa njani i-Sunifiram?
Iziyobisi zixhaswa ngokubanzi kwifomsule yokusetyenziswa komlomo kwaye ziphantse zibe nemiphumo emibi, njengoko izithako zingekho netyhefu. Uluhlu lwe-Sunifiram lwenza kube lula ukufumana ilungiselelo elifanelekileyo kwonyango ngalinye.
7. Ziziphi iziphumo zecala Sunifiram?
Ukuba uthathwa ngokuchanekileyo, akufanele ukulindele imiphumo emibi. Nangona kunjalo, ngokuhamba kwexesha, umzimba ukwakha ukunyamezela kwisiza. Emva kokungena ixesha elide kunciphisa umphumo. Ngoko ke, unyango alufanele kuthathe ixesha elide kunokucetyiswa kwiphepha lephepha. Kwimilinganiselo ephakamileyo, ii-agent zinefuthe elikhuthazayo, okubangela ukuba iipilitations ezincinci okanye zingabonakali.
8. Yiyiphi i-Sunifiram yamava ayaziwa?
Uninzi lwabasebenzisi luchaza impembelelo ethembekileyo yamalungiselelo kwaye ichaza amava abo aseSilifiram ngokulungileyo. Ngaloo nto, amandla okufunda kunye nenkumbulo ingahlaziywa kwimihla ngemihla. Ukongezelela, amalungiselelo anempembelelo entle ekujonganeni neemeko ezixinzeleleyo. Ziyakhusela ingqondo ekuhlaselweni ngokomzimba nangokwengqondo okubangelwa ziziyobisi okanye izibhengezo.
Amalungiselelo ngokwabo awanakho ukuvuselela kunye neziphumo ezinobungozi. Ngenxa yoko, abaninzi abasebenzisi basebenzise imveliso kwimpilo yabo yemihla ngemihla ngaphandle kwemiphumo. Kwi-pharmacology, ii-agents zibizwa ngokuba ngabaphuculisi be-neuro okanye i-smartpills ezisetyenziselwa ukugcina nokuphucula ukusebenza kwengqondo. Nangona kunjalo, iimveliso zisetyenziswa kakhulu njengonyango kwizifo ezinciphisa umsebenzi wengqondo. Kule mimandla, imo yezenzo iqinisekiswe ixesha elide kwaye abasebenzisi babika iziphumo ezintle ngeziphumo.
Okwangoku, abantu abanempilo kwaye banempilo banokusebenzisa iindlela zokwenza umsebenzi ongcono kunye nobomi bemihla ngemihla. Benzisa i I powifiram powder uludwe, bonke abathengi baya kufumana ukulungiselela okufanelekileyo. Umphumo okhuselekileyo unayo inkunkuma ngokubhekiselele kwenyuka kwixinaniso. Ngenxa yeso sizathu, abaninzi abathengi bathi bangasebenzisa le mveliso njengengqondo "yokutshata kwengqondo" ekunyamezelweni okuphezulu ngexesha lokufunda okanye emsebenzini. Amachiza, ngaphezu kokubhekisana nokubhekisana neemeko ezixinzeleleyo, zineminye imiba yempilo ngokunjalo. Bandisa ukwakhiwa kunye nokunceda ngezigqibo ezinzima nokunciphisa iintshukumo zangaphambili. Ukongeza, iipatheni zokulala ziguquka, zenza ukuba kuphuculwe.
I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike yeNoopept	Uhlolo olusisiseko olunzulu lwe-Testosterone Cypionate